I-CNG Jumbo Tube Skid Container-CNG yezoThutho noGcino-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Vala ubuchwepheshe bokujikeleza okusetyenzisiweyo, ubume obungenamthungo, kunye nokuthembeka ekusebenzeni kokhuseleko.
Ubungakanani besayizi enkulu, iivalves ezimbalwa, iityhubhu kunye namalungu, kunye nomngcipheko omncinci wokuvuza kwerhasi.
Ukucoceka kuyilo nakwimeko, kunye nolondolozo lwesiza kwindawo leyo.
Ukukhupha ngokulula ulwelo lwentsalela.
Ukuxhotyiswa ngemibhobho yesebe kunye nezixhobo, kulula ukusebenza kunye nokugcinwa.
Ubunzima obuncinci bezithuthi zonke, ukunciphisa umsebenzi wetrektara notyalo-mali.
I-SinoCleansky CNG izikhongozeli zeetyhubhu ezinkulu ziveliswa ngokwe-ISO11120, iDOT, okanye i-ASME, kunye nengxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, LRS, TUV okanye iqela elilinganayo lomntu wesithathu.
Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kugcino lwendawo yokugcina izinto kunye nokuthuthwa kweendlela eziphakathi.
1. Ukungenisa ngaphakathi kwevaluva ezikumgangatho ophezulu;
2. Itekhnoloji yokwenziwa kobuchwephesha, izixhobo ezifanelekileyo zokuvelisa kunye nenkqubo yeinshurensi esemgangathweni enokwenzeka.
3.Ingahambelana ngokudibanisa ezahlukeneyo kunye ne-CNG okanye amanye amaqela eesilinda zokugcina iigesi kwaye anokwanelisa iimfuno ezahlukeneyo zabathengi.
4. Ukufakwa kwekona esemgangathweni kunye nesakhelo sesikhongozeli, ukuthuthwa ngokulula
I-17.4mm Ukutyeba kodonga Uhlobo oludumileyo lwe-CNG
Uxinzelelo lokusebenza / MPA
Ubungakanani besilinda / mm
Izixhobo ubunzima / KG
Ubungakanani bamanzi / M3
Ukuzalisa umthamo wegesi / i-NM3
Ubunzima bebonke / KG
Ubungakanani beSkid / iTrailer
Uhlobo lwe-14.8mm yoDonga lokuKhanya kweNdonga ye-CNG
Sokumakishwa: 1. Idatha yokugcwalisa umthamo wegesi, ukulayisha ubunzima kunye nobunzima obupheleleyo busekwe kwi-CNG.
2. Ezi nkcukacha zingasentla zenzelwe kuphela iintlobo zethu eziqhelekileyo. Iiparameter ezichanekileyo ezichanekileyo kunye nemizobo yobugcisa ziyafumaneka xa ziceliwe
I-jumbo tube skid ingathunyelwa njengesiqulatho ngokuthe ngqo ngesiqulatho sesikhongozeli.
I-CNG jumbo ityhubhu skids zinengxelo yovavanyo yomntu wesithathu kunye nengxelo yeefektri eneenkcukacha. Ingxelo yovavanyo lomntu wesithathu ibandakanya uvavanyo kwisilinda nganye, kunye novavanyo lokuqina komoya weskid. Ingxelo yomzi-mveliso iya kubandakanya isiQinisekiso soMgangatho, iNcwadi yokuFundisa, ingxelo yovavanyo lwefektri, njl.
Ingxelo ye-BV yeNgxelo:
Ungalukhetha njani uhlobo olulungileyo?
Sinoluhlu lwemveliso esele lukhona ukuze ulujonge kwaye ukhethe; Okanye ungasixelela ukuba kufuneka ukugcwalisa okuphakathi / uxinzelelo olusebenzayo / umthamo wamanzi / ukuSebenza (ukuGcina indawo yokumisa okanye ukuhambisa izinto eziphakathi), emva koko siya kuncoma imodeli efanelekileyo kuwe; Ngaphandle koko, iJumbo Tube Skid inokwenziwa ngokwezifiso, ke sinokuxoxa ngayo ukuba kukho naziphi na iimfuno ezizodwa.
Zeziphi izatifikethi esinazo?
Izilinda zethu zejumbo zenziwe ngokwe-ISO11120 / DOT / ASME esemgangathweni, kwaye sinokunika ingxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, i-LRS, i-TUV okanye iqela lesithathu elilinganayo.Ukongeza, iisilinda zethu zejumbo zinokuqinisekiswa yi-TPED, ezinye iimodeli zethu zeJumbo Tube Skid ziqinisekisiwe yi-ADR, kwaye ezinye iimodeli zinokuqinisekiswa ngokweemfuno zabathengi.
Ngawaphi amaxwebhu azakufakwa xa kusiwa iimpahla?
Amaxwebhu akhutshwe ngumzi mveliso: Isatifikethi somgangatho / incwadi yemiyalelo / ingxelo yovavanyo lwefektri njl.Iidokodo ezikhutshwe ngumntu wesithathu: Ingxelo yovavanyo olupheleleyo (kubandakanya iipropathi zomzimba, iipropathi zemichiza, iingxelo zovavanyo lwamanzi, njl.
Amaxwebhu akhutshwe ngumzi mveliso: Isatifikethi somgangatho / incwadi yemiyalelo / ingxelo yovavanyo lwefektri njl.njl. Amaxwebhu akhutshwe ngumntu wesithathu: Gcwalisa ingxelo yokuhlola (kubandakanya iipropathi zomzimba, iipropathi zemichiza, iingxelo zovavanyo lwamanzi, njl.